Sethiwe igama ingakabi bikho nemishanguzo – Bayede News
Emva kwalokho kuqubuka izimboni ezintsha zenze umsebenzi wokudambisa nokuvimba ukubhebhetheka kwesifo, abelaphi bathole imali ngesimo esikhungethe umphakathi.
by nguLindani Dhlomo Posted on 12 February 2020 12 February 2020
Sekunezifo eziningi ezaziwa njengezifo ezingelapheki, okugcina sekwenziwe imishanguzo yokuzidambisa zilaliswe okwesikhashana, zigcine zingene ezinhlelweni zikaHulumeni zidle imali unyaka nonyaka. Amazwe ahluphekayo yiwo angaphansi kwengcindezi yomnotho yiwo akhandleka ngoba izakhamuzi zawo zesuleleka kalula ngezifo ngoba ziphila ngaphansi kwezimo zobubha. Igama elisematheni kulezi zinsuku ngeleCoronavirus okuyisifo esisamkhuhlane esivumbuke eChina sifuna ukuvala ngehlahla.
Ngiyaye ngimangale uma ngizwa ngesifo engisithatha njengesifo esisha, sibe sesiqanjwe igama bengakakwazi nokuselapha. Sethiwa nini igama isifo igama? Kungabe lethiwa ngoba sekubonakale abantu belala phansi noma bendela koyisemkhulu, behlula noma bekhothiswa izibiba ezijwayelekile? Kula masonto ambalwa edlule sizwe ngobuyaluyalu obudalwe yilesi sifo eChina, kwakhishwa nezibalo zabangasekho bethathwa yilesi sifo. Akulula ukwazi ukuthi sizokhalinywa ngokushesha okungakanani ngoba okwamanje sibonakala sibhebhetheka.
Ezinye izifo zifika zingelapheki ziphele nya esizweni, zize zigcine sezejwayelekile zibe yingxenye yempilo yabantu, abantu sebehamba nazo. Emva kwalokho kuqubuka izimboni ezintsha zenze umsebenzi wokudambisa nokuvimba ukubhebhetheka kwesifo, abelaphi bathole imali ngesimo esikhungethe umphakathi.
Lolu hlobo lwezifo ziyawuhlasela umnotho wezwe ngoba zidinga izinhlelo eziqondene nazo ngqo, ezinye ezisungulwa ngaleso sikhathi. Kulezi zinsuku abangena eNingizimu Afrika beliqhamukisa eChina bayahlolwa esikhumulweni sezindiza befika nje bengakahlangani nemindeni ukuthi alikabangeni yini lolu bhubhane lwesifo. Izifo eziqubuka njengalesi ziyethusa ngoba zisithola singazelele kubonakale imiphefumulo eminingi seyihambile noma seyigebele eweni. Imboni yezokwelapha iyimboni esemqoka futhi edinga ukuhlala iqaphile ukuze izimo ezifuze lezi zingashayi zibhuqe kunganakiwe. Amehlo omhlaba ayabhekisisa ukuthi leli lizwe linayo yini imishini yokuhlola lesi sifo nemithi engathiba leso sifo kuze kutholakale ikhambi eliqondene naso ngqo. Ukuqubuka kwesifo njengalesi kudinga izwe libe nobuchwepheshe bezempilo ukuze ingabonwa impi seyingaphakathi.
Ngenkathi uMnyango Wezempilo uphendula kweminye imithombo yezindaba uchaze indlela uMnyango oqinisekisa ngayo ukuthi asingeni isifo ngaphakathi ezweni. Uthe imishini ehlola labo abafikayo esikhumulweni sezindiza isendaweni lapho kudlula wonke umuntu bese ikhipha umbiko ngaye, okuthi uma kusolisa angabe esavunyelwa ukuhlangana nabanye abantu kungaqinisekiswanga isimo sakhe sempilo. Uma ubona izithombe zabantu abanakekela labo abakhungethwe yileli gciwane eChina, ziyakhombisa ukuthi nabo kumele bazivikele ukuthi linganamatheli kubo nabo bagule. Idolobha iWuhan eChina linabantu ababalelwa ezigidini ezili-11,08 kanti liyindawo ehlala iphithizela enamabhizinisi amaningi. Ukuqubuka kwalesi sifo kulithikamezile leli dolobha ngoba abantu sebesaba ngisho ukuya ezitolo ezinkulu lapho bezohlangana nabaningi. UHulumeni waseChina usungule izindlela eziphuthumayo zokulwa nalesi sifo, kungaze kuvalwe ngehlahla. Ekuqaleni kwesonto isibalo sabesebendele koyisemkhulu besesisondele emakhulwini amane, okuyisibalo esiphezulu ezweni elilodwa esikhathini esingaphansi kwenyanga.
Lokhu kulibamba izwe lingazelele kudinge imali eyanele ukubhekana nalesi simo. Isimo somnotho waseNingizimu Afrika sibi futhi sengathi sisazoqhubeka sibhede. Irandi liyantengantenga uma liqhathaniswa nezimali zakwamanye amazwe asondelene naleli lizwe. Ukuze ibhekane nalesi simo iNingizimu Afrika kumele ibhukule ngenxa yezizathu ezimbalwa ezisemqoka. Esinye sezizathu ngesokuthi ziningi kakhulu izakhamuzi zaseChina, esezikuleli likaMthaniya, kanti futhi uma ugibele ibhanoyi eliqhamuka ngaseMpumalanga ingxenye enkulu yabagibeli banenswebu yamaShayina. Uma kuyisifo esithathelwanayo abaseNingizimu Afrika kumele babhekisise. INhlangano Yomhlaba Yezempilo (WHO) yexwayisile ngokuthi lolu bhubhane luzowuthwalisa kanzima umnotho waseNingizimu Afrika. Igcizelele ukuthi eminyakeni engamashumi amabili edlule izinhlobo ezehlukene zombulalazwe ofuze iCoronavirus zadla umnotho obalelwa ezigidigidini ezili-140. Akukaziwa-ke lesi ukuthi sizophelela kuphi. Ngenxa yokuhlasela kweCoronavirus kuqagulwa ukuthi umnotho waseChina uzokwehla ngamaphesenti ayisi-5,6. Kunezitolo esezinqume ukuvala isikhashana ukusebenza eChina ngenxa zalesi sifo, njengesakwa-Apple nezinye.
Ngenxa yalesi sifo uHulumeni waseChina unqume ukuvimba ukungena eChina, ikakhulukazi eWuhan, okwenza ukungena nokuphuma kwemikhiqizo kwehle kakhulu, okukhahlameza amabhizinisi amaningi amakhulu. Kumiswe imidlalo eminingi namakhonsathi abehleliwe ngenxa zokwesabela impilo yabantu okulimaza imboni yezokungcebeleka eChina. Inkampani yakwa-IMAX ebeyihlele ukukhombisa okokuqala izithombe eziyisihlanu eChina zinqume ukukuhlehlisa lokhu. Izinkampani noHulumeni welule isikhathi samaholide okwenza kube sobala ukuthi umnotho uzothikamezeka kakhulu kulo nyaka. IChina beyikhula ngesivinini kwezomnotho ibangisana kakhulu ne- USA ngonyaka owedlule. Okubuye kwathatha amehlo ukwakhiwa kwesibhedlela esizokwelapha iziguli ezineCoronavirus esinemibhede eyinkulungwane, esakhiwe saqedwa ngezinsuku eziyishumi. Iziphathimandla zedolobha iWuhan zihlela ukuguqula izindawo ezintathu ezisedolobheni ezihlanganisa indawo yokujima nenye eyi-Exhibition Centre ukuba zibe yisibhedlela esizothatha iziguli eziyizi-3 400 ngesikhathi esisodwa.
Uma silinganisa ngezibhedlela zikaHulumeni ezikhona lapha eThekwini asikho esinemibhede yeziguli eziyi-1 000. Okunye okuvusa imicabango ethile wukuthi asikho nesisodwa isibhedlela engisaziyo lapha eNingizimu Afrika esithathe unyaka owodwa sakhiwa, angiyikhulumi-ke eyezinsuku eziyishumi. Unyaka owodwa ungase uphele kusalokhu kuxoxwa ngokuthi kuyokwakhiwa isibhedlela, kuphikiswane kuze kugcine sekucatshangwa ukuthi siyokwakhiwa isibhedlela uma isimo sezimali sesivuma. Uma kunombhedukazwe wesifo esinjengalesi amazwe akhahlamezeka kakhulu yilawo avele asesimweni somnotho esivele sisibi. Ngeke kumangalise uma iNingizimu Afrika ikhahlamezeka ngenxa zokubhebhetheka kweCoronavirus. Siyadinga njengezwe ukubhekisisa ukuthi yiziphi izindlela esingazisebenzisa ukwenza izinhlelo eziwusizo emphakathini zisheshe ukufinyelela kuwo.
Posted in iBayede Kuleli Sonto, Kuleli sonto kwelaboHlanga